बानेश्वरको मिठाई पसलमा शिलबन्दी ! – Everest Dainik – News from Nepal
बानेश्वरको मिठाई पसलमा शिलबन्दी !
काठमाडौं, असोज १६ ।
सरकारले नयाँ बानेश्वरमा रहेको संगम मिठाई पसलमा शिल गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन टोलीले अखाद्य वस्तु मिसावट गरेर मिठाई बनाएको भेटिएपछि त्यस मिठाई पसलको उत्पादन केन्द्र र बिक्री वितरण केन्द्र दुवै शिल गरेको हो ।
परीक्षणको क्रममा ७ वर्ष अघिको ‘डेट एक्स्पायर’ भएको पाउडरको समेत प्रयोग भएको पाइएपछि मिठाई पसल शिल गरिएको विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत इश्वर सुवेदीले जानकारी दिए । विभागले त्यस पसललाई खाद्य ऐन अन्तरगत कारबाही गर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने गरी अखाद्य वस्तु मिसाएको पाइएमा त्यस्ता वस्तु उत्पादन केन्द्रमाथि कडा कारबाही हुने पनि विभागका अनुसन्धान अधिकृत सुवेदीले चेतावनी दिए । विभागले यस वर्ष अनुगमनको क्रममा उत्पादन केन्द्रको भौतिक अवस्था, कानुनी पक्ष र त्यसमा प्रयोग गर्ने प्रविधिमाथि पनि कडा निगरानी राखेको छ । सरकारले खाद्य स्वच्छता अभियान अन्तरगत बजार अनुगमनको कामलाई सुरु गरेको हो ।
ट्याग्स: Sweet Shop Band